Ny teny hoe politika dia avy amin'ny fiteny grika hoe politikê ("siansan'ny raharahan-tanàna"). Teny mitovy dika amin'ny fandrindrana ny tanàna ny politika. Ny tanàna resahina eto dia tanàna mizaka tena grika taloha.
Ny politika dia ny fomban'ny olona miaina ao amin'ny vondrona hanapa-kevitra, ny fifanarahana eo amin'ny olona mba hahafahany miara-miaina eo amin'ny vondrona toy ny foko natanàna na firenena. Ao amin'ny vondrona lehibe, toy ny firenena, ny olona sasany dia mety ho lany fotoana manao fifanarahana toa izany. Ireo olona ireo no antsoina hoe mpanao politika. Ny mpanao politika, ary indraindray ny olona hafa, dia mety miaraka mba hanangana ny fitondram-panjakana. Ny fandinihana ny politika ao amin'ny oniversite no atao hoe siansa ara-politika, fianarana ara-politika, na ny fitantanam-bahoaka.
Eo amin'ny fiainana andavanandro, ny teny hoe politika dia manondro ny fomba hitantanana ny firenena, ary ny fomba anaovan'ny fitondram-panjakana fitsipika sy ny lalàna. Fa ny politika koa dia hita ao amin'ny vondrona hafa, toy ny orinasa lehibe na ny sekoly na ny fiangonana.
Ny governemanta dia miezaka ny hitarika ny vondrona manontolo. Ny fitondram-panjakana dia manao zavatra toy ny:
Manapa-kevitra mikasika ireo olona mahazo tapa-tany
Manapa-kevitra mikasika ny olona afaka milaza ny olon-kafa ny zavatra tokony hatao - manapa-kevitra na handeha hiady amin'ny firenena hafa
Manao zavatra ilain'ny fiarahamonina rehetra, toy ny lalana, hopitaly, trano famakiam-boky, ary ny seranana.
Manabe ny olona, ho an'ny tombon-tsoan'ny tenany, na hampianatra azy ireo ny zavatra tian'ny governemanta ho fantany
Mikarakara ny tena tanora, ny marary, na ny be antitra
Mitantana ny hahasoa ny firenena ary ny mitantana ny vola azo laniana amin'ny raharaha (hopitaly, sekoly, sns)
Ny iray amin'ireo fomba itaritan'ny governemanta ny vondrona dia ny fanaovana lalàna sy ny fitsipika, izay milaza ny olona rehetra izay afaka sy tsy afaka ataony. Manao ny lalàna hahatongavana amin'izany ny fitondram-panjakana mba hampilamina ny fiaraha-monina. Ny lalàna hoe "Aza misotro toaka raha mitondra fiara" dia manakana ireo mamo tsy hitondra fiara, izay mety hahafaty olona. Ny lalàna "tsy maintsy manao fiarovan-doha rehefa mitondra môtô" dia natao hiarovana ny tena. Ny governemanta koa dia afaka mifehy ny olona sy ny zavatra mitranga ao amin'ny firenena amin'ny fomba hafa ankoatra ny fanaovana lalàna.
Ohatra, ny fomba andanian'ny governemanta vola dia mety hampisy fahasamihafana lehibe amin'ny zavatra hataon'ny olona na ny zavatra hitranga amin'ny olona. Raha toa ka mandany vola be amin'ny hopitaly sy ny mpitsabo mpanampy ny governemanta, dia mety ho salama kokoa ny olona. Na koa, raha mankasitraka ny fitondram-panjakana ny olona, na mihevitra fa hendry governemantany, dia mety hanao zavatra izy ireo satria lazain'ny ny governemanta fa izany no zavatra tsara tokony hatao. Matetika manao dokam-barotra afisy na fahitalavitra izay mamporisika ny olona hiala tamin'ny sigara ny fitondram-panjakana, na hihinana voankazo sy legioma betsaka kokoa.
Politika no matetika oharina amin'ny etika (hevitra momba ny tsara sy ny ratsy). Ny fitsipi-pitondran-tena dia fianarana saro-takarina kokoa momba ny tsara sy ny ratsy. Ny fitsipi-pitondran-tena dia mandalina ny fitsipika bebe kokoa noho ny lalàna na politika na ny fifampiraharahana iraisam-pirenena, ka maro no mihevitra fa tsy azo ampiharina ny fitsipi-pitondran-tena. Fa raha tsy misy fifanarahana eo amin'ny fitsipi-pitondran-tena, dia mety tsy misy fomba isian'ny adihevitra, lalàna na fifidianana. Amin'ny rafitra ara-politika dia misy foana ny fifanarahana amin'ny etika sy ny fitondran-tena manokana.